स्वास्थ्य बीमा प्रति बढ्दो आकर्षण, १७ लाख बीमितले गरे स्वास्थ्य बीमा, कार्यक्रममा सहभागी हुन यस्तो छ प्रकृया ! - सुनाखरी न्युज
Posted on: June 8, 2019 - 10:10 am
स्वास्थ्य बीमा प्रति मानिसको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विमाको आवश्यकता र महत्व बढेपछि १७ लाख बीमितले स्वास्थ्य बीमा गरिसकेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमामा ६ अर्ब रकम विनियोजन भएको छ । हाल ४६ जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका वरीष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. भुवन पौडेलले – हाल सम्मको तथ्याङक अनुसार १७ लाख बीमित
स्वास्थ्य बीमाको दायरामा रहेको बताए । २०७५र७६को बजेटले स्वास्थ बीमाको दायरा फराकिलो बनाएको छ । ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमालाई पुराउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ , यसले बीमाको पहुँचमा समेत वृद्धि गर्ने बताए ।
सरकारले बृद्धभत्तामा बजेट बृद्धि गर्ने निर्णयबाट १३ लाख बृद्धबृद्धाले लाभ लिने जनाएको छ । बजेटमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बिधवा, अपाङ्ग भएका महिलाहरुको भत्ता समेत बृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् । घोषणा गरिएको भत्ता आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
स्वास्थ बीमामा कसरी सहभागी हुन:
५ जना परिवारलाई बोर्डले स्वास्थ्य उपचारका लागि वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्छ । ५ जनाभन्दा बढी प्रति थप सदस्य वापत सुविधाको थैलीमा २ लाख बढ्दै जान्छ र परिवार संख्या अनुसार बढीमा २ लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार पाईन्छ । जेष्ठ नागरिकले वार्षिक १ लाख सम्मको उपचार सुविधा पाउँछन् । स्वास्थ्य बीमामा सुविधा लिन हरेक वर्ष अनिवार्य रुपमा नविकरण गर्नुपर्नेछ ।
सहभागी हुन लाग्ने रकम :